China Threaded Ball Check Valve orinasa sy mpamatsy |Dongsheng
3. Karazana fifandraisana: BSP na BSPT
5. Medium: Rano madio, rano an-dranomasina, zavatra sakafo, menaka isan-karazany, asidra, ranoka alkali sns.
Ny valva fanaraha-maso baolina kofehy dia ampiasaina betsaka amin'ny rano maloto, rano maloto na fantsona rano mihantona avo lenta.Mazava ho azy fa azo ampiharina amin'ny fantsona misy tsindry amin'ny rano fisotro.Ny mari-pana amin'ny antonony dia 0 ~ 80 ℃.Izy io dia natao miaraka amin'ny fahaverezan'ny entana ambany dia ambany noho ny fandehanana tanteraka sy ny sakana tsy azo atao.Izy io koa dia valva tantera-drano sy tsy misy fikojakojana.
Vy ductile, vatana sy bonnet misy epoxy, seza NBR/PDM ary baolina aluminium mifono NBR/PDM.
Misy habe: 1″ hatramin'ny 3″.
Ny mari-pana: 0°C hatramin'ny 80°C na -10°C hatramin'ny 120°C.
Naoty tsindry: PN10
Mora ny fikojakojana sy ny fametrahana.
Ball Check Valve miaraka amin'ny vatana vy ductile
4 Baolina NBR/EPDM
5 Bolt Inôksa
6 -bazana Inôksa
teo aloha: Flanged Ball Check Valve
Manaraka: Flanged Silent Check Valve
Product Video Product Description Single disc check valve dia antsoina koa hoe single plate check valve, izany dia valva izay afaka misoroka ho azy ny fikorianan'ny fluid.Ny kapila amin'ny valva fanamarinana dia misokatra eo ambanin'ny hetsika fanerena ranon-javatra, ary ny fluid dia mikoriana avy amin'ny lafiny fidirana mankany amin'ny lafiny fivoahana.Rehefa ambany noho ny eo amin'ny lafiny fivoahana ny fanerena eo amin'ny lafiny fidirana dia mihidy ho azy ny valva flap eo ambanin'ny fihetsiky ny fahasamihafan'ny tsindrin-tsakafo, ny heriny ary ny antony hafa ...
Thin Single Disc Swing Check Valve Miaraka amin'ny Lohataona
Product Video Product Description Compact, stainless steel wafer swing check valve dia manome tombo-kase miavaka ho an'ny tsindry ambony sy ambany.Mety amin'ny fametrahana eo anelanelan'ny PN10/16 sy ANSI 150 flanges amin'ny refy 2 ″ hatramin'ny 12″ Ampiasaina ho an'ny tanjona manokana, indostrialy ary HVAC.Ny rano, ny fanafanana, ny rivotra ary ny fitaovana rivotra mipoitra dia fampiharana.Valve fitsapana ara-toekarena izay mamonjy toerana.Na mitsangana (miakatra ihany) na mitsivalana napetraka.Lafin-javatra lehibe: C...